Amabhiliyade kubhekwa umdlalo somuntu, ngakho ukubukeka abesifazane ebukekayo e professional ensimini njalo elihlobene ne nesithakazelo esikhulayo phezu ingxenye izilaleli. . Ngakho-ke ingabe isimemo futhi plaid Michaela Tabb ngo-2001 ukusebenza njengoba unompempe ngesikhathi tournaments esemthethweni Umhlaba Snooker Association.
Michaela - punter
Lesi sithakazelo zomphakathi womhlaba wonkana kulesimo Michaela Tabb wavezwa ayilona ize. Owazalelwa eNgilandi, ngo-December 11, 1967, ngo-23, yena isivele eyayenziwa ngesikhathi professional enkundleni pool, azobamba iqhaza kulo mqhudelwano ayisishiyagalombili. Ngonyaka olandelayo, ngo-1992, Michaela Tabb wenza njengengxenye zabesifazane licembu lesive lesitigcabha Scotland sakubo futhi idlalwe amabhiliyade e ngezithako zawo njengoba ukaputeni kuze 2003. Kamuva ngo-1996 iqembu lesizwe yena yadibana udadewabo Dzhuletta Tabb. Ngaphezu ukudlala eqenjini lesizwe, ibalula mncintiswano futhi kwaletha impumelelo Tabb. Micaela wathatha endaweni yokuqala e-UK Championship ngo-1997 futhi lo mqhudelwano European kwabesifazane ngo-1998. Kukholakala ukuthi Michaela Tabb okungcono unompempe zesifazane isinyathelo ngaso imincintiswano ku snooker kanye pool futhi kwaba esinye abakwaziyo best imvelo jikelele.
Umsebenzi kanye nempilo yakho
Michaela yena uthi pool yakhe bakhangwa omunye bakhe babafana, futhi echibini kakhulu angena empilweni yakhe, wanquma embopha nge ikusasa lakhe. Wayethi uma efunda isayensi yokuhlalisana kwabantu e-University of Glasgow, kodwa hhayi iziqu, wakhetha ukunikela ngakho konke umdlalo pool. Akumangalisi ukuthi umyeni Mikaela ayefeze amabhiliyade professional kanye pool owaziwayo imvelo emhlabeni. Kuyinto ukusekela kwakhe, waqala umsebenzi wakhe njengoba tournaments ijaji ukhanyisé ithelevishini, ngisho wabalwela amalungelo abo enkantolo. Umndeni udlala indima ebalulekile empilweni amabhiliyade inkanyezi, yena wayenamadodana amabili, Morgan futhi Preston, 1997 kanye 2007 ngonyaka lokuzalwa, ngokulandelana.
Izinyathelo kuqala refereeing
Njengoba unompempe Michaela kwaqala ukubonakala mqhudelwano zabo, ihlelwe ngokuhlanganyela umyeni wami ekunyusweni amabhiliyade ngo-90s. Lawa kwakungamadodana tournaments amateur eziyisishiyagalombili nesishiyagalolunye (pool izinhlobo) ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi yi-World Billiard Association. Ngo-1997 waba umahluleli Michaela lochwepheshe olufana kulo mqhudelwano Andreya Pervozvannogo, futhi ngo-1998 okokuqala wokhela kumabonakude ngesikhathi sokusakaza. Ngenxa bomsebenzi kanye ulwazi oluhle umdlalo, yena zasihlonipha abadlali, ke wamenywa ukuba wahlulele tournaments ezweni in pool phakathi ochwepheshe.
Джим МакКензи. ukubukeka Ziyamangalisa odlale ezandleni Michaela: ibona ke ikhanda Kwezwe Snooker Association Dzhim Makkenzi. indoda Halo elomile unprepossessing phakathi snooker unompempe zidinga dilution futhi kancane of ubukhazikhazi ukuheha ukunaka izilaleli, futhi kufanelekile lokhu indima ke Tabb. Michaela indiva yendabuko yokufunda umthetho iminyaka 5, kokuba Yiqiniso kukhubazeka abakwaziyo snooker. 3 класса. Lapho beqeda ukuqeqeshwa imiphumela 2001 ikaela M Tabb wathola isimo snooker professional unompempe Class 3. Yiqiniso, abanjalo isingeniso okusheshayo Mikaela ku ezahlukene izintandokazi uqiniseka nozakwethu kanye nobuholi Umhlaba Snooker Association umxhwele. Lokhu akuzange kuvimbele Michaela, futhi ekuqaleni kuka-2002 wenza njengoba uchwepheshe snooker unompempe ubuqhawe evulekile Wales eCardiff. Snooker unompempe umsebenzi Mikaela ningabizwa ngokuthi Licwathile, inkontileka yakhe imisiwe ehlobo 2003. Umhlahlandlela uchaza ngesinqumo yokuntuleka kwezimali, futhi kamuva, ekwindla ekuqaleni konyaka esifanayo, Tabb wathola inkontileka entsha. Amabhiliyade bekulokhu umdlalo club emiphakathini eduze futhi ivaliwe, ngakho singakwazi kuphela ukuqagela ukuthi kwakwenzekani emhlabeni we snooker le minyaka futhi impela sanikwa omunye wabesifazane bokuqala phambili ekukhulumeni kwabezindaba, yangaphambili ngaphambili kuphela wesilisa kanjani kanzima. Noma kunjalo Michaela Tabb baba abadlali ethandwa futhi umphakathi, futhi umsebenzi wakhe uye wafuna kancane kancane. Ngo-2008, waba umahluleli wokuqala zesifazane abayalwa ukuba wahlulele yokugcina global kule midlalo. Kuleso umdlalo Endryu Higginson kancane ihluleke Neil Robertson.
Izimo zethu zihluke kakhulu Tubb impikiswano igcwaliswe yakhe eneminyaka engu-14 umsebenzi. Duzane kokuhamba kwakhe lalingaphezu eziningi amahemuhemu, ize ngoba lalibhekwa ijaji sasivumela onegunya futhi lithandwa nababukeli. Ngokusho version esemthethweni Michaela Tabb, ukuhoxiswa kuxoxwa ngokuthi inketho, wesula ngenxa lokungabiwa ngokulinganayo imiklomelo phakathi isakhiwo zokwahlulela, futhi wamangalela Umhlaba Snooker Association, isola umqashi yangaphambili luhlangothi lunye kanye nokuthatha ngokobulili. Yiqiniso, inhlangano ayengenakuvumela emphakathini imininingwane kunjalo, futhi ngosuku lwesibili wokulalelwa abayisishiyagalombili ngemvume kwesivumelwano sobumfihlo. Lokhu akusho kunganciphisa umnikelo Michaela akwenza emhlabeni we snooker, lokho ngokusemthethweni wabonga ebhaliwe kwi-website ye-Association.
Michaela Tabb, uchwepheshe snooker unompempe ngempela ubuhlungu ngasinda ngokuhamba kwakhe snooker. Okwamanje ukuthi ukwenza ngaphandle kokuhlela umndeni nowahlulelayo olufana imincintiswano lesifunda echibini.